China Imishini yokuwasha ingilazi egobile yabakhiqizi nabaphakeli bamawindi emoto | Fuzuan
Ingilazi iyadingeka: Amawindshields anelayini emoto (amashidi angawodwa)
Inombolo yemodeli: FZBGW-2000
Usayizi Wengilazi Omkhulu: 1850*1250 mm Ubuncane Bengilazi Usayizi: 1200*400 mm
Ubukhulu bengilazi: 1.6mm – 5 mm
Isivinini Sokudlulisa Kwengilazi: 3-10 m/min
Ukujula Kokugoba: UMax. 240mm
I-Cross-Curvature: Max. 40mm
Imodi yokuwasha: Ukugeza ngezinsimbi zokufafaza ezinomfutho ophezulu kuphela.(Sinezinhlobo ezimbili, enye iza namabhulashi nezinsimbi zokufafaza ezinomfutho ophezulu.)
Uhlelo Lokulawula: Allen Bradley PLC/HIM
Ukusetshenziswa: Ukugeza futhi ukomisa ingilazi ye-windshield yemoto egobile
Enqubweni yokukhiqizwa kwengilazi ye-laminate windshield, izibuko ezigobile zivela ezithandweni zokugoba kuma-racks ensimbi. Izibuko zihlukaniswe ngamapheya (izibuko zangaphakathi nezangaphandle zihlangene).
Amapheya engilazi kuma-metallic racks azolethwa endaweni yokulayisha kulayini wokucubungula ingilazi lapho azolayishwa khona kuma-conveyors.
Khona-ke izibuko ngeke zibhangqwe kumaconveyor bese zithuthela emshinini wokuwasha ogobile: ishidi ngeshidi (Okungaphakathi kuqala kanye nokulandelayo Okungaphandle). Zonke izibuko ziqondiswe ngamaphiko phansi (Concave phansi, ubuso 4 emabhandeni okuthutha). Ngemva komshini wokuwasha, izingilazi ezomile zihamba phezu kwesihambisi ziye emhubheni wokupholisa (lapho zizopholiswa khona kuze kudingeke izinga lokushisa ukuze zihlanganiswe namashidi e-PVB).
Lo mshini Wokuwasha wengilazi egobile usetshenziselwa ingilazi yezimoto enamayini, njengamawindi omoya agobile nezingilazi eziphezulu zemoto.
Isivinini se-FZBGW-2000: 3-10 m/min (Esingokwezifiso)
Lo mshini wokuwasha ingilazi egobile wakhiwe ikakhulukazi
● Ihlelo Lokugeza.
Igumbi elivalwe ngensimbi engagqwali elinomnyango wokungena.
Igumbi elivaliwe kufanele liklanywe ingxenye yonke, ukuze ikwazi ukulawula amanzi ahlanzekile kangcono (gwema i-spatter)
Uhlaka lomshini ngokwawo kanye nazo zonke izingxenye ezithinta ngokuqondile noma ngokungaqondile ngezinto zamanzi e-deminerzied ziyinsimbi engagqwali (No.304)
Zombili izinhlangothi zegumbi elivaliwe zihlomisa izicabha zokufinyelela, emnyango wokufaka ukhiye kanye nefasitela elakhiwe ngengilazi elaminethiwe, ukungena kalula ekamelweni elivaliwe ukuze lilungiswe, futhi ngesikhathi sokusebenza ukubheka isimo sokugeza ingilazi.
Isakhiwo segumbi elivaliwe sinendawo eyanele, kulula kubantu ukwenza ukunakekelwa ngaphakathi.
Yonke iminyango ifaka iswishi yokuphepha, ngaphandle kwemvume ukuvula umnyango uzocisha bese uvala iphampu, isistimu yokuphakelayo kanye nesiphephetha-moya, udlala ingxenye yokuvikela ukuphepha.
Phezulu kwegumbi elivaliwe kufakwa ama-floodlights angu-2, qinisekisa ukuthi ngefasitela elibhekwayo leglasi lomnyango wokungena libe neso, ukuze lilungiswe ngaphakathi.
Phansi kwegumbi elivalekile lakhiwe njengethangi lamanzi, hlukanisa indlela yokuqala yomshini wokuwasha, indlela yesibili yomshini wokuwasha ngomfutho ophezulu.
I-flume ngayinye ekhuphukayo ifakwe i-valve yokuphunyuka, efakwe ngokuqinile futhi ihlanganiswe nebhodi lezinyawo endaweni yeminyango.
Amanzi emithonjeni emithathu angageleza esuka emuva aye phambili, lapho amanzi eflume esigabeni samanzi ahlanzekile esihlanza amanzi echichima, angagelezela kuflume yomfutho ophezulu edlula ebhodini eliphakathi nendawo; lapho amanzi e-flume esigabeni somfutho ophezulu wokuwasha echichima, angagelezela ku-flume ehlelweni lokuhlanza ngaphambilini. lapho amanzi e-flume yokuhlanza ngaphambilini echichima, angageleza ngaphandle kwethangi lamanzi ngembobo echichimayo.
Amanzi ethangini awakwazi ukugeleza emuva, kusho ukugeleza kwamanzi ahlanzekile kuya kumfutho ophezulu bese egeleza ekuhlanjululweni kwangaphambili, ukuqinisekisa ukuhlanzeka kwamanzi.
Ithangi lamanzi lihlomisa inethi yokuhlunga ephaketheni ukuze lihlunge futhi liqoqe ingilazi ephihlizayo, kulula ukuyikhipha ukuze ihlanzwe.
Emnyango wengilazi wehlelo lokugeza ufaka umthunzi wepulasitiki ukuvimbela isipayisi samanzi.
Phakathi kwehlelo lokuwasha nokomisa liklama ukuhlangana okungangeni manzi, kube nethreyi lamanzi omhlangano.
● Dlulisa Uhlelo
Ukudluliswa kwengilazi egobile kusebenzisa ukuhanjiswa kwebhande elilungisekayo
Ukumiswa kohlaka lokuphakelayo konke kuyinsimbi engagqwali , okuhlanganisa ukuthwala, akukwazi ukusebenzisa izingxenye zensimbi engagqwali, kufanele kuthathe ezinye izinto ezingavimbela amanzi akhishwe amaminerali kanye nokugqwala, njengerabha noma inayiloni.
Amamotho amabili adlulisayo afaka ngokulandelana lapho kuphuma khona kanye nasekungeneni kwehlelo lokomisa, angathinti ngamanzi. Isebenzisa i-Inverter ukulungisa isivinini, ingafinyelela ukushintshwa okungenamkhawulo
Lonke uhlaka lokuthutha luhlukana lube izingxenye ezimbili, lugoqeka ngokuphambana ukuze luphakele (Isidluliseli sohlobo olugqagqene ) , luthatha ngamabhande angu-3.
Ekungeneni nasekuphumeni kwenzwa yokufaka umshini wokuwasha, ingahlola okokufaka nokuphumayo kwengilazi.
● Ukugeza ngaphambili ( Amanzi ashisayo)
Ukuhlanza kuqala kusebenzisa ikhanda lokufafaza ukuze lihlanjululwe, amakhanda okufafaza axhumeke epayipini elincane lamanzi, bese amapayipi asabalalisa ngokulinganayo epayipini elikhulu lamanzi ngokusebenzisa i-pipe nip, ubude bepayipi elincane lamanzi lakhiwe ngokuvumelana nokuma kwengilazi, qinisekisa ukuthi ukugeza ngokugcwele. .
Umzila wamanzi ohlanjululwa ngaphambili uhlanganisa ipayipi lamanzi phezulu naphansi + ubufushane amapayipi amanzi amancane + imibhobho yokufafaza + iphampu yamanzi + isihlungi esine-pressure meter + flow meter ene-alamu egelezayo ephansi njll.
● Ukugeza ngomfutho ophezulu ( Amanzi ashisayo)
Ukugeza okunomfutho ophezulu kusebenzisa ikhanda lokufafaza ukuze liwashwe, amakhanda okufafaza axhuma epayipini elincane lamanzi, khona-ke amapayipi asabalalisa ngokulinganayo epayipini elikhulu lamanzi ngokusebenzisa i-pipe nip, ubude bepayipi elincane lamanzi lakhiwe ngokuvumelana nokuma kwengilazi, ukuqinisekisa ukuhlanza ngokugcwele. .
● Ukugeza ngamanzi e-DI (Nge-heater yepayipi)
Ukuhlanza amanzi ahlanzekile kusebenzisa ikhanda lokufafaza ukuze lihlanjululwe, ikhanda lokufafaza lixhuma epayipini elincane lamanzi, amapayipi amancane amanzi asabalalisa ngokulinganayo ngepayipi lepayipi epayipini elikhulu lamanzi, ubude bepayipi elincane lamanzi lakhiwe ngokuma kwengilazi, qinisekisa ukuhlanza. ngokugcwele.
Umzila wamanzi ohlanza amanzi ahlanzekile uhlanganisa ipayipi elikhulu lamanzi elikhuphuka naphansi + ipayipi lamanzi elincane elifushane + imibhobho yokufafaza + iphampu yamanzi +isihlungi esinemitha yokucindezela + amamitha okugeleza ane-alamu ephansi ye-flux.
● Isigaba Sokumisa.
Igumbi elivalwe ngensimbi engagqwali elinomnyango wokungena
Igumbi elivaliwe kufanele liklanywe lilonke, ukuze uthole ukulawula okuhle komfutho womoya
Uhlaka lomshini ngokwawo kanye nazo zonke izingxenye ezibonakalayo ezithinta ngokuqondile noma ngokungaqondile ngamanzi akhishwe amaminerali ziyi-SS304.
Izinhlangothi zombili zegumbi elivaliwe zinezicabha zokungena, izingidi zokufakwa ezicabheni kanye nefasitela elakhiwe ngengilazi elikhanyayo, kulula ukungena egunjini elivaliwe ukuze lilungiswe, futhi emsebenzini qaphela isimo sokumisa ingilazi.
Isakhiwo segumbi elivaliwe kufanele sibe nesikhala esanele, kulula ukuthi abantu banakekele futhi bahlanze ingilazi ye-smash ngaphakathi.
Yonke iminyango ifaka iswishi yokuphepha, ngaphandle kwemvume lapho ivuliwe umnyango uzocisha ngokushesha bese uvala iphampu yamanzi, uhlelo lokuphakelayo kanye nesiphephetha-moya ukuqinisekisa ukuphepha kuyavikela.
Phezulu kwegumbi elivaliwe kufakwa ama-floodlight angu-2, ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukubukeka kwamehlo ngefasitela elibonwa engilazi lomnyango, ukuze kulungiswe ngaphakathi.
● Ummese womoya olungisekayo (owenziwa ngesandla noma umakhenikha)
Ifakwe amapheya angu-4 emimese yomoya.(Kwenziwe ngokwezifiso)
Ummese womoya ngamunye ungalungisa ngokuzenzakalelayo ukuphakama.
Zombili izinhlangothi zommese womoya zingalungisa i-engeli ngesikhathi esifanayo, ukuqinisekisa ukuthi ingilazi yomisa ngokugcwele.
Ukulungiswa kwe-engeli yezinhlangothi zombili zemimese yomoya kulawulwa yinjini.
● Ibhokisi Lokuvuthela abalandeli
Ibhokisi labalandeli lihlukanisa izigaba ezimbili: i-filtrate chamber ne-fan chamber
Igumbi lokuhlunga lihlomisa ngomnyango owodwa wokuhlola nokulungisa, lingangena egumbini lokuhluza ukuze lihlolwe futhi lilungiswe.
Igumbi lokuhlunga lifaka phakathi igebe lomoya elinenetha yokuhlunga ngaphambili, inethi yokuhlunga efakwe ephaketheni.
Igumbi labalandeli lisetshenziselwa ikakhulukazi ukufaka isiphephetha-moya, kanye nesicabha sokuhlola nokulungisa, singangena egunjini labalandeli ukuze sihlolwe futhi silungiswe.
Ibhokisi labalandeli lifaka ukotini ofaka umsindo, ukuvimbela umsindo nokwanelisa isicelo semvelo.
I-outlet air ye-fan ihlomisa ngomnyango womoya, lapho ifeni yokuqala izovikela i-fan motor.
Engxenyeni yokomisa, inesitebhisi esincane nophahla oluyisicaba okulula ukulunakekela abantu abangena kulo.
1.2 Amapharamitha wezobuchwepheshe
Ukujiya Kwengilazi 1.6mm-5 mm
Ukujula Kwe-Bend Ubukhulu 240mm
I-Cross-curvature Ubukhulu 40 mm
Isivinini Sokudluliswa Kwengilazi 3 - 10 m/min (Kwenziwe ngokwezifiso)
Ubukhulu. Isivinini sokumisa 10 m/min
Ummese Womoya 4 Ababili
Ubukhulu 10470*4270*2850mm (Okwenziwe ngokwezifiso)
Isisindo Esiphelele 25,000kg
Amandla Aphelele 280KW
Umoya ocindezelwe Amabha angu-6 asuswe umswakama / angenawo amafutha
Amanzi Angenawo Amaminerali <5us/sq.cm
Ingcindezi 3-4 imigoqo
Isicelo sengilazi Ingilazi egobile, ngemva kokugaya
● Igumbi elivalwe ngensimbi engagqwali elinomnyango wokungena
● Ummese womoya olungisekayo (imanuwali nemishini)
● Ukuvikela amanzi, sebenzisa inqubo yokushisela egcwele ukuze uvale uhlaka oluhlangene ngokushisela.
● Ukuhlanzeka okuphezulu, ukugeza ingilazi yemoto ngesifutho esinomfutho ophezulu,
● Ithangi lamanzi lixhunywe okungenani namasethi amabili amapayipi okufutha anomfutho ophezulu ngepompo yamanzi ajikelezayo kanye ne-heater.
● Ingxenye yokomisa umoya ihlanganisa amaqembu ahambisanayo emimese yomoya ngaphezulu nangaphansi kwedivayisi yokudlulisela engxenyeni yokomisa umoya, futhi ummese womoya ngamunye eqenjini lombese womoya unikezwa idivayisi yokuphakamisa ejikelezayo.
● Idivayisi yokuphakamisa ingabona ukujikeleza nokuphakamisa ummese womoya, futhi kulula ukulungisa ummese womoya ukuze ube nesimo esifanele ingilazi eyomisiwe emoyeni, ngaleyo ndlela uqinisekise umfutho womoya ozinzile futhi uzuze umphumela omuhle wokomisa umoya.
● Idivaysi yokudlulisela yakhiwe ngamabhande okudlulisela anamabanga ahlukene phakathi kwezinhlangothi zombili ukuze kuqinisekiswe ukuthi awekho amakhona afile ngaphansi kwengilazi egobile, futhi ingahlanzwa futhi yomiswe ngomoya ngendlela eyindilinga.
● Izinzwa zifakwe ekungeneni nasekuphumeni komshini wokuwasha ukuze kutholwe ukungena nokuphuma kwengilazi. Lapho ingilazi ingangeni noma ingaphumi isikhathi esithile, iphampu izoma ukuze yonge ugesi.
Okwedlule: Gobisa imishini yokuwasha ingilazi yamawindshields ebhasi yeloli
Olandelayo: Imishini yokuwasha ingilazi egobile ifasitela ingilazi sidelites Quarters
Gobisa imishini yokuwasha ingilazi yemimoya yamabhasi eloli...
Imishini yokuwasha ingilazi egobile ewindini lengilazi...
Umshini wokuwasha ingilazi obheke ngemuva